China High-liphume steel ifektri abakhiqizi | Honghua
Isakhiwo sensimbi sezitezi eziningi zokuhlala
Isakhiwo seGuangdong GoTone (Ikheli elisha) Ngokwesakhiwo esiqinile sohlaka, imishayo namakholomu kwakhiwa ngendlela eyodwa ukuze kumelane nezikhathi ezibekiwe ngenxa yemithwalo. Ukuqina kwe-lateral kohlaka oluqinile kuncike ekuqineni kokugoba kwamakholomu, ama-girders nokuxhuma endizeni
Isakhiwo seGuangdong Gotone (ikheli elisha) sisenkabeni yeZhujiang New Town, eGuangzhou. Kuyinkimbinkimbi entsha yebhizinisi yeChina Mobile (Guangdong) Company.
Ukwakhiwa: I-Guangdong Mobile Communication Co., Ltd.
Isikhungo sokuklama: I-Guangdong Institute of Architectural Design and Research;
Indawo: IHuaxiaRoad, iZhujiang New Town, iTianhe District, iGuangzhou City;
Usuku lokuvulwa nokuqedwa kwenkontileka: Ephreli 23, 2006 - Ephreli 23, 2009
Uhlobo lokwakha: ibhokisi shear
Indawo yokwakha: amamitha skwele ayi-121,547
Inombolo yezitezi: 37 ngenhla komhlaba, 3 ngezansi komhlaba
Umbhoshongo omusha weGlobal umi eduze kwaseHuaxia Road endaweni esemqoka yeZhujiang New Town, eGuangzhou.Kuyisakhiwo sesimanje samahhovisi esakhiwa ngumbhoshongo omkhulu nokwakhiwa kwesiketi.
IGotone Tower entsha itshalwe amabhizinisi ombuso aziwayo (okungewona awokwakha) eZhujiang New Town. Ibekwe njengesinye sezakhiwo eziyingqophamlando eGuangzhou naseZhujiang New Town. Isakhiwo iGotone sinezitezi ezintathu ngaphansi komhlaba, izitezi ezingama-37 ngenhla komhlaba, ikakhulukazi sinezindawo zokusebenza, njengokuphathwa kwehhovisi, ukukhiqizwa kwezokuxhumana, ihholo lombukiso, inkundla yezemidlalo kanye negceke eliphakathi. Umhlaba wokwakha uhlanganisa cishe amamitha-skwele ayi-16,640. Kuyinhliziyo yokusebenza kweChina Mobile esifundazweni saseGuangdong kanye nesikhungo sokusekelwa kokuxhumana kwezokuxhumana seMidlalo Yase-Guangzhou yase-2010.
Ukuhambisana nebanga eliphakeme lesakhiwo salo samahhovisi aphezulu, izinto zalo zangaphakathi zisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme. Lezi zakhiwo zidingeka izakhiwo ezihlobene kakhulu, ikakhulukazi uhlelo lonke lokulawula umhlaba wonke, kumele kube uhlelo oluqinile futhi oluzinzile, ngakho-ke, iGloba lBuilding entsha yakhetha iCrestron Central Control System. Njengamanje, yibanga eliphakeme kunawo wonke, ubuchwepheshe obuvuthwe kakhulu, imisebenzi ephelele kakhulu, ukusetshenziswa kakhulu, ukuqaphela uhlelo lwehhovisi lokulawulwa okuphakathi kanye nokuphathwa okuhlakaniphile kwemishini ehlukahlukene kagesi nokukhohlisa kwabantu.
Njengesikhungo sokwesekwa kwezokuxhumana kanye nemiyalo yemidlalo ka-2010 yase-Asia, iGlobal Tower igqugquzela imodi yokusebenza enekhabhoni ephansi nemvelo, futhi isebenzisa ubuchwepheshe obuhlukahlukene obuhlukahlukene, izinto ezintsha nobuchwepheshe obusha kuyo yonke imininingwane yesakhiwo. Lesi sakhiwo sineqoqo eliphelele lemisebenzi, futhi sihlanganisa imvelo, ubuntu, ukuhlakanipha, ukonga ugesi kanye nokuvikelwa kwemvelo.
Uhlaka oluqinile lwesakhiwo sohlelo
Ngokwesakhiwo esiqinile sohlaka, imishayo namakholomu kwakhiwa ngendlela eyodwa ukuze kumelane nezikhathi ezibekiwe ngenxa yemithwalo.
Ukuqina kwe-lateral kohlaka oluqinile kuncike ekuqineni kokugoba kwamakholomu, ama-girders nokuxhuma endizeni
Ifanele izakhiwo zokhonkolo eziqinisiwe.
Ingasetshenziswa nasekwakhiweni kwensimbi, kepha ukuxhumana kuyobiza.
Enye yezinzuzo zozimele abaqinile amathuba okuhlela nokufaka amawindi ngenxa yokuhleleka okunezinxande.
Amalungu ohlaka lohlaka oluqinile amelana nesikhathi sokugoba, amandla okushefa, kanye nemithwalo ye-axial.
Izakhiwo ezingama-20 kuye kwezingu-25 zingakhiwa kusetshenziswa uhlelo lohlaka oluqinile.
Izinzuzo zohlaka oluqinile zifaka ukwakhiwa okulula, ukusebenza kanzima kungafunda amakhono wokwakha kalula, kwakhiwe ngokushesha, futhi kungakhiwa ngokomnotho.
Ubuningi besikhala sogongolo bungu-12.2m kanti imishayo emikhulu yesikhala ingase iwele ekuphambukeni eceleni.
Okubi ukuthi isisindo sakho siphikiswa isenzo esivela kuzimele eziqinile.
Ekugcineni, iBurj Al Khalifa okuyisakhiwo eside kunazo zonke emhlabeni sakhiwa kusetshenziswa uhlelo lohlaka oluqinile.
Langaphambilini Isakhiwo sensimbi esiteshini sesitimela esenziwe ngaphambili
Olandelayo: Ukwenyuka okuphezulu kwesakhiwo sokuhweba sensimbi
Ububanzi bebhizinisi Ubumbela nokufakwa kobunjiniyela besakhiwo sensimbi nobunjiniyela benetha. Kwenziwa umklamo ation mbumbulu kanye nokufakwa kwesitshalo sefektri, impahla yokugcina impahla, izakhiwo ezinemigqa eminingi nokuphakama okukhulu, isakhiwo somphakathi, amabhuloho, izindlu zezindlu, izindonga zamakhethini nezinsimbi zensimbi, kanye nokwenziwa nokuthengiswa kwensimbi.